Njalo inyanga, uyabona ukuba imali iyahamba njengamanzi ngeminwe yakho? Kwaye ke ayithengi nantoni na. Mhlawumbi kufanelekile ukucinga ngokutya okufanelekileyo? Akukho malunga nokutya okutsha, okudinga iindleko ezininzi zokuthenga izithelo kunye nemifuno, kodwa ngokuphathelele ukutya okunokutya okulungileyo: ngaphandle kokutya okukhawulezayo, i-soda nezinye izinto eziyingozi. Emva koko, ixabiso elifanelekileyo lemali liya kubo nyanga zonke, kwaye akukho nzuzo kwimpilo, yingozi kuphela.
Nazi imigaqo emincinane emfutshane eya kukunceda uqale ukutya ngokufanelekileyo kwaye ngexesha elinye ugcine ukutya.
1. Yidla iphariji. Kukho iintlobo ezininzi zeesinkwa kunye neentlobo ezahlukeneyo zokupheka ngokukhawuleza kwiishelulo eziyimibandela emihlanu yokupheka ipharya kwasekuseni. Ukunciphisa isobho eliqhelekileyo ekuseni: musa ukulayisha umzimba ngamafutha amaninzi, ityuwa kunye nezilondolozo. Iphaji elifudumele liza kubuyisa ukugaya, kwaye kungekudala uza kumangaliswa ukuba uqaphele ukuba isidlo sakusihlwa asikho sikhulu kunesihlabathi.
2. Amaqanda - umthombo weeprotheni ezincinci kunye namavithamini. Yongeza kwidlo kwasekuseni i-omelette kunye neetamatisi okanye amaqanda atyhidiweyo-iyinto ehlwabisayo kwaye ingabizi.
3. Intlanzi iyanciphisa i-cholesterol, inceda ukunciphisa umzimba. Esikhundleni seentlanzi zasolwandle olutsha, ungathenga i-herring ye-salted-ityhile kakhulu, kwaye iimpawu ezincedo zifanayo. Ngaphambi kokusetyenziswa, gcoba i-herring ukususa ityuwa engaphezulu.
4. Ukuba usetyenziselwa ukuthenga imifuno engabizi ehlobo, uye kwimifuno echwayibhile ebusika - ubuchwepheshe bokuqhwala namhlanje bugcina ubuninzi bezondlo kwiimifuno. Imifuno ehluthiweyo isoloko ithengiswa ngohlobo lweemixube eyenziwe ngokufanelekileyo-kufuneka kuphela ukupheka okanye ukupheka. Kwaye kukho iindawo ezinjalo ezisebusika ezithengeka kakhulu kuneentsholongwane ezihlambulukileyo-ukugcinwa okubonakalayo.
5. I-Serum iyimithombo ekhoyo yamaprotheni. Kwi-serum endaweni yobisi unako ukupheka i-porridge: iiprotheni zigcwele kakuhle kwaye zibuyiselwe emva kokuzivocavoca
6. Phuza iiVithamini - ziya kuhlawula isidingo somzimba "zokungaqhelekanga" ukutya, kwaye awuyi kufuna ukuyidla imihla ngemihla i-grapefruit okanye imango. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kufuneka ulahle ngokupheleleyo isiqhamo.
7. Ukuba uthanda ukupheka kwaye awukwazi ukucinga isidlo ngaphandle kwesidlo esitsha, khumbula iincwadi zokupheka endala, uzame nemveliso elula, ungahlali uhlangene kwi-exotics ebiza.
8. Ungazithengi ukutya okuphezulu-khalori - abancedi ngaphantsi kunye neendleko ezingaphezulu. Endaweni ye-20% ukhilimu omuncu, thabatha i-15%, zama ukusela ubisi obuncinane. Ukuphumla okunjalo kwangoko kuya kuba nefuthe elibonakalayo kwimbonakalo yakho.
9. Ulawulo oluphambili lwevenkile: musa ukuhamba ngokutya. Kwisisu esingenalutho kunzima ukukhetha okuyimfuneko, kukho isilingo sokuthenga konke kunye nokunye, kwaye awukwazi ukuthetha ngokugcina. Lungisa uluhlu lwezinto ezifunekayo ukuthenga kwangaphambili.
10. Ungagqithisi imali yeemveliso zeemveliso, thengisa abo owakuthandayo, nokuba ngaba abadumi kakhulu. Ungakulibali ukuba intengo yomkhiqizo ayixhomekeke kuphela kumgangatho wayo, kodwa nakwixabiso lemali esetyenziswe kwiintengiso zayo. Indleko - ayisoloko ihamba phambili.
11. Unganqikazi ukuthatha ukutya ukuze usebenze. Thenga isitya esikhethekileyo seplastiki kwaye uhlalise ngokutya eofisini ngokutya okuqhelekileyo okwenziwe ekhaya. Musa ukuchitha imali kwi-cafe. Ngokukodwa akubandakanyi ukutya okukhawulezayo!
12. Phuza ngokucacileyo amanzi okanye i-tea - ngaphandle kwe-soda. IziHlomelo kunye neemibala eziyingxenye yokwakhiwa kwazo, ukuphazamisa ukutyunjwa nokuguqula isisu sibe yinyani yamachiza yendalo yamachiza. Ingakumbi musa ukusela isoda ngexesha lokutya.
13. Yaye into yokugqibela - ungadli! Ungalibali i-golden golden rule - ukunyuka kwitafile encinci, uzuze impilo yakho, kukunceda ulahlekelwe ngamapounds, kodwa uhlakulele umkhwa wokupheka ngaphantsi. Njengoko bethetha, ipenki i-ruble.
Ngaba ukutya "okutya" kugcwele?
Isikhwama sezonyongweni zasehlobo
NgoLwesihlanu ongu-2015 - iimveliso ezineesaphulelo ezifikelela kuma-70%
Amanzi okuhlambela ngeenyawo, izilwanyana zomntu
Umququ kunye nempahla ekhutshiwe "I-Sardines eoli"
Izinwele ze-Haircuts ngokubhekiselele kuhlobo lwabasetyhini
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-andalusite
UKsenia Borodina ucela izipho zokuthengisa
Isimo sezulu eMoscow: Disemba 2016. Yintoni eya kuvela ekuqaleni kweeDisemba nokuphela kukaDisemba, ngoNyaka kaNtshonalanga-ukubikezelwa kwi-Hydrometcenter eMoscow nakummandla
Ziziphi iintlobo zothando?
Uvavanyo: Misela umbala wakho ngombala wakho ozithandayo
Ukwabelana ngesondo ngaphandle kokungena: isikhokelo esisebenzayo